5 nzira Expo2020 inowedzera Hupfumi hweDubai | Mabasa - Basa - Hupfumi hwekufamba
5 nzira Expo2020 ichasimudzira Economy ye Dubai
Kubva munaOctober 20, 2020, kusvika muna April 10, 2021, UAE ichave ichigamuchira nyika kuve nokupemberera tsika, kubatana uye zvishandiso paZimbabwe Expo Fair Fair.
Iyi ndiyo nguva yokutanga World Expo yaizobatwa munzvimbo yeArabhu, uye nzvimbo yacho iri nzvimbo ye Expo 2020 ku Dubai. Kusvikira musi, nhamba yose yeZ190 dzenyika dzakatsigira kutora chikamu muchiitiko chekuratidzira chakaiswa kuzounza mamiriyoni evanhu muUAE. Musoro wakasarudzwa weEexpo 2020 ndi "Kubatanidza Mifungo, Kuumba Ramangwana", ne-sub-themes kuva Sustainability, Mobility uye Mukana.
Rwendo rweEexpo 2020 rwakava mukuru kune 27th November 2013, apo Dubai yakakunda kodzero yekugamuchirwa mukati mekufara, kufara uye zviputi. Izororo reNyika rakaparidzirwa kumasangano ose edzidzo munyika yose zuva rinotevera. Izvi zvinokuratidza kukosha kwechiziviso uye zvakare chiitiko chinoreva kwete ku Dubai chete asi iyo yose UAE uye Middle East nzvimbo. Chinangwa chekusiya nhaka inofanirwa uye inogara kwenguva refu inogona kuramba iripo kwezvizvarwa nenguva iyo Expo inoshandiswa pamutemo.
Marudzi anotevera akazivisa kupindira kwavo muEexpo 2020:
Makambani ekuThengisa uye Kukurukurirana ari kufambira mberi uye ari kutungamirirwa zvakanaka pamatanho akawanda. Pakave nekugutsikana kwakasiyana siyana kweEexpo ne superstars uye makambani epasi pose uye masangano atojekesa mavashoni avo mazano uye matsva.
Kunze kwezvose zvinokudzwa uye mapeji ezvo iyo Expo 2020 ichakanganisa sei hupfumi, uye inobatsirei iyo ku Dubai yose?
Iyo yepamutemo YouTube channel ye Dubai Expo 2020
5 nzira Expo2020 ichasimudzira Economy ye Dubai - Shanyira Expo 2020 YouTube Channel
Kubona kwenyika kugadzira mabasa chiratidzo chekuti hupfumi hwenyika huri kushanda uye hunoshanda. Kana imwe nguva mikana yekushandiswa ichigadzirwa, kune kuwedzerwa kushandiswa kwevatengi saka kuwedzerwa kwemari. Mabhizimisi anobudirira uye kazhinji achitaura, vanhu vanogona kunakidzwa nemararamiro emararamiro akanaka mune zvehupfumi hunochengetedza. Mushure mokunge Dubai ichinzi yakasununguka seyo yeWorld Expo 2020, yakafungidzirwa kuti kupfuura 277, basa re 149 raifanira kusikwa pakati pe2013 kusvikira pakuguma kweEexpo mu2021 zvichienderana nekudzidza.
Aya mabasa ari kusikwa mumativi ese ezvepfumi kusanganisira Tourism, Retail, mari, Real Estate, Kubvakwa, avhiyesheni, mutsa, Technology, Media & Communications, Transportation, chibatiso, Trade and Investment nezvimwe zvakawanda. Pamusoro pe 'Career' chikamu cheSaintendent Expo2020 Dubai, kune zvingasarudzwa kuti upe CV uye ushandise mikana yakawanda iripo. Mikana yaJobho ichave iripo yekutanga-nguva, panguva yeEexpo uye mushure mokunge uine nguva.
Ona yose mazaruriro emabasa neEexpo 2020
Kare, zviuru zvakashanda zvikuru mukuvakwa, teknikoroni nekufambisa kwemashoko sezvo mabasa achiri kuenderera kune imwe nzvimbo ye Expo2020 nedzimwe nzvimbo dzakakosha mukugadzirira kwaOctober 2020. Mabasa mazhinji emamwe marudzi akave akaitwawo kuburikidza nokubatanidzwa kweve nyika dzakasiyana. Vatsvaki veJobho vanogona kushandisa mikana iyi mukana wekuva chikamu chenhoroondo yekuita nhoroondo.
Tourism ndiyo chinhu chinonyanya kukosha mukukura kwehupfumi hwehupfumi hweUAE. Maererano ne Dubai's Dhipatimendi re ushanyi & Commerce Marketing, Dubai yakanyora zvikamu zviviri kubva muzana kubva mukushanyirwa kwekushanyirwa kunoenzaniswa nenguva imwe chete gore rapera. Sezvo pamagumo ekutanga kwekota ye2019, Dubai yakagamuchira 4.75 mamiriyoni evashanyi vemarudzi ose.
Dubai inonyanya kuzivikanwa pamapu e World Tourism nemitambo yakadai seBurj Khalifa, The Palm uye Burj Al Arab hotera. Ikozvino, UAE inoshandisa mitemo mina yeUNESCO World Heritage Sites, ine mamwe masere masere asina kuoneka Cultural Heritage.
Kubatwa kweDhailand kweWorld Expo 2020 kuenderera mberi nekuvandudza kuwedzera kwevatariri munyika ino, panguva uye shure kweEpo. Anofungidzirwa kuti vanhu vane mamiriyoni e25 vanotarisirwa kushanyira Expo 2020 ku Dubai pakati pe20th October 2020 uye 10th April 2021.
Imwe Dubai Inoshandiswa Kwekushanyirwa nekutengeserana (DCTCM) inoshanda nguva dzose pamwe chete nehurumende yehurumende yekupinda kune dzimwe nyika kuitira kuti zvive nyore kune vashanyi vanoenda ku Dubai kuti vawane visa nyore nyore. Dubai ndiyo inonyanya kukwirira munharaunda yacho uye iri nyore nyore hutano hwevafambi vari munzira yavo kuenda kunzvimbo ipi zvayo yenyika.
Ne World Expo 2020, Dubai yakave yakanyanya kufadza sehanzvadzi yekuenda, uye izvi zvinotungamirira kukurumidza muGDP nokuda kwekuwedzera kwehupfumi munyika.
Kuwedzera Kwekubhadhara Mikana
Kuvimba nevatengi kunowedzera apo hupfumi huri kubudirira uye hunogara huripo. Maererano nehurumende yakasununguka kubva kune dzimwe nyika inoshandiswa nehupfumi huri EY, Expo 2020 Dubai inotengeswa kwenguva refu mune ramangwana renyika ichawedzera hupfumi hwayo neAED 122.6 bhiriyoni (USD 33.4 bhiriyoni) nekutsigira 905,200 basa-makore pakati pe2013 ne2031.
Dubai inotarirwa kuona kuwedzera kwekutsvaga kwepasi pose nekuda kwekodzero dzayo yekugadzirisa Expo2020. Kuita zvekutsvaga kunowedzera kune imwe nyika iyo ine mukurumbira wekuchengeteka, kugamuchira, kubatsira. IUAE ndiyo yose uye yakawanda uye iri nyore uye iri nyore muGulf uye Middle East nzvimbo. Kuita zvekutsvaga kwakasununguka kunzvimbo dzeHurumende, Dhinda, Real Estate & Kubudirira, Zvemari, Kuzvivaraidza, Tourism, Construction, Hospitality, Aviation uye mamwe akawanda.
Makambani mashoma mabhizimisi akadzoka kana kuti akazarura matavi nemahofisi ku Dubai. Kuvakwa kunoenderera mberi kwezvizhinji zvezvirongwa izvi. Mhirizhonga uye masangano evanhu vari munyika dzakawanda vari kuzvienzanisa ivo veEexpo nevashandi vavo vehurumende vachizvikudza vachiratidzira kushamwaridzana kwavo mune zvekutsvaga uye mabhizimusi. Vose vatengesi vemunharaunda uye vokunze vanogona kuvimba kuti neWorld Expo 2020 inobatwa muDhaibha, hupfumi hweUAE hwakasimba, uye hupfumi hwavo hwakachengeteka uye hunofanirwa kudzorerwa.
Kuwedzera uye kukurudzira mune bhizinesi rekugara
Dubai iri kumabhizimisi akawanda, uye vadzidzisi vari UAE Nationalals, expats uye vatorwa vepamwe kunze. Kune dzakawanda dzimba dzemunharaunda-dzakagadzirwa pfungwa dzaizobatsirwa nekugadzirisa Dubai kweEexpo 2020. Mabhizimisi emunharaunda ndiwo mushure mekukura kwehupfumi hwose, uye hurumende dzakawanda dzinoshandisa mari yekudzivirira uye mbeu dzekutanga mbeu kukurudzira kushandiswa kwebhizimisi uye kukura kwekambani dzemunharaunda. Bhizimisi rekumba kwekumba, masangano makuru makuru uye maSME anotarisirwa kuti aone kukura kwakanyanya mumashandisirwo uye kushandiswa kwezvikwata zvakasiyana-siyana mu Real Real, Media, Travel and Tourism, Leisure, Retail uye zvezvemabhizimisi makuru emabhizimisi.
Kune mikana yakawanda yebhizimisi yakatanga mumativi ose aya anowanikwa kunyange mitsva itsva uye inobuda. Nzira dzakawanda dzekambanikoni dzenharaunda dzinogona kuongororwa kuburikidza nekutsvaga uye kutengesa nzira dzinowanikwa mukana wokutenga. Iko Expo2020 ine yekusununguka-kushandisa-inoshandiswa inoshandiswa pasi rose pamusika pamusika apo mikana yebhizimisi inogona kuwanikwa kuburikidza nekunyora uye kunyanya kubatsira kune SME. Iyi inzira inoshanda iyo bhizinesi remugariro rinosangana nekugadzira miganhu mitsva inogona kuratidza nyika zvavanofanira kupa.
Kuvandudza mune zvigadzirisheni
The Expo2020 yakaona kukura kukuru mune zvigadzirwa zvemuzinda we Dubai neUAE zvakakura. Kutakura kunotungamirira kunzvimbo yeEexpo yakadai semigwagwa, mitsara yemigwagwa uye mabhiriji akawedzerwa uye akavandudzwa. Kune mamwe mapurogiramu anoenderera mberi mukuvakwa kwamahotera, nzvimbo dzekugara, utano hwehutano, nezvimwe zvivako zvemabhizimisi.
Mashoko aya anowanikwa anoratidza kuti nzvimbo dzakawanda dze nzvimbo yepaiti dzinogona kushandiswa zvakare, uye izvi zvinosimudzira chirongwa chinogona kuzivikanwa seWestern 2020 mushure mokunge Expo. Kugadziriswa kwezvivakovheni uye zvigadzirwa zveEexpo zvichabatanidzwa kumusoro wayo weSustainability, Mobility uye Opportunity. Nzvimbo iyi iri pedyo neAl Maktoum International Airport, Dubai World Central (DWC) muJebel Ali uye izvi zvichaita kuti kutakurwa kwevashanyi nevatengesi.
Zvivako zvekugadzirisa zvichange zvichiri kushandiswa zvisati zvaitika, panguva uye shure kweEpo; uye kuwedzera kwebhizimisi uye hupfumi sehuse.
5 nzira Expo2020 ichasimudzira Economy of Dubai,
Itikiti yemashoko yakatove yakasiyana mumusiyano we 1day, 3-mazuva, mwedzi nemwedzi kupfuura. Panova nevechidiki uye mudzidzi anononoka; uye rusununguko rusununguko rwevanhu vanozvitsunga, vanhu vakuru 65 uye pamusoro, uye vana kusvika kumakore 5.
Nyika Expo 2020 yakapa Dubai kururamisira kwakanaka uye mukurumbira inofanira kusimbisa kuvimba kwenyika yose kune avo vanogara kune dzimwe nyika uye kune dzimwe nyika. Iyo yakawedzerawo manzwiro ekudada kwevanhu vemunyika yeUAE uye vagari vemo pamwe chete uye vachasiya nhaka inotarisirwa kwenguva refu mumatsika uye emari kukura.
(Marketing Marketing, Writer, Musiki Wenyaya)